vday – Media9
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေfeb14 media9 naylinkyaw vday
[Unicode] “တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ရတာလည်းသိပ်တော့အဆင်မပြေဘူး။ချစ်သူလေးဘာလေးထားရင်ကောင်းမလား။နောက်နှစ်တွေမှာ february 14 ကိုစုံတွဲလေးတွေနဲ့ အားလုံအတူတူဖြတ်သန်းကြမယ်”လို့ဆိုတဲ့ ‘နေလင်းကျော်’ [Zawgyi] “တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ရတာလည္းသိပ္ေတာ့အဆင္မေျပဘူး။ခ်စ္သူေလးဘာေလးထားရင္ေကာင္းမလား။ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ february 14 ကိုစုံတြဲေလးေတြနဲ႔ အားလုံအတူတူျဖတ္သန္းၾကမယ္”လို႔ဆိုတဲ့ ‘ေနလင္းေက်ာ္’
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေeichawpo media9 surprise vday
[Unicode] Vday နေ့ကျရင်ဘယ်လို surprise တွေရောက်လာမလဲဆိုတာ အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြမယ် ….ဆိုတဲ့အိချောပို [Zawgyi] Vday ေန႔က်ရင္ဘယ္လို surprise ေတြေရာက္လာမလဲဆိုတာ အဲ့ဒီေန႔က်ရင္ပရိသတ္ႀကီးကိုေျပာျပမယ္ ….ဆိုတဲ့အိေခ်ာပို
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း လူမှုဘဝ သတင်း အမေးအဖြေmaymikoko media9 vday
[Unicode] အရမ်းအပျော်အပါးမက်တဲ့ယောကျ်ားလေးမျိုးလဲမကြိုက်ဘူး တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့သူမျိုးပဲသဘောကျတယ်လို့ ပြောလာတဲ့မေမီကိုကို [Zawgyi] အရမ္းအေပ်ာ္အပါးမက္တဲ့ေယာက်္ားေလးမ်ိဳးလဲမႀကိဳက္ဘူး တည္ၿငိမ္ေအးေဆးတဲ့သူမ်ိဳးပဲသေဘာက်တယ္လို႔ ေျပာလာတဲ့ေမမီကိုကို #Maymikoko #media9
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေmedia9 thazinoo vday
Valentine’s Day မှာတကယ်သာယာမယ်ဆိုရင်အဖော်လေးတော့ဆောင်ဆိုတဲ့…’သဇင်ဦး’…
[Unicode] Vday မှာချစ်တဲ့သူချင်းတော့သာယာမှာပေါ့.. ကိုယ်ဆိုလဲသာယာမိမှာပါ ဒါပင်မယ့် အကာအကွယ်လေးတော့ ဆောင်ထားကြပေါ့ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်သဇင်ဦး #Media9 #ModelThaZinoo [Zawgyi] Valentine’s Day မွာတကယ္သာယာမယ္ဆိုရင္အေဖာ္ေလးေတာ့ေဆာင္ဆိုတဲ့…’သဇင္ဦး’… Vday မွာခ်စ္တဲ့သူခ်င္းေတာ့သာယာမွာေပါ့.. ကိုယ္ဆိုလဲသာယာမိမွာပါ ဒါပင္မယ့္ အကာအကြယ္ေလးေတာ့ ေဆာင္ထားၾကေပါ့ လို႔ဆိုလိုက္တဲ့ ေမာ္ဒယ္သဇင္ဦး
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေmedia9 suzie vday
[Unicode] “စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့တစ်ထပ်တည်းမကျတဲ့အခါမှာကိုယ်တောင်မှပဲအခုချိန်မှာတစ်ယောက်တည်းအပျိုကြီးဖြစ်နေသေးတာပဲ။စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့အခါ….”လို့ဆိုတဲ့ ‘ဆူဇီ’… [Zawgyi] “စိတ်ကူးနဲ႔လက်ေတွ႔တဈထပ်တည်းမကႀတဲ့အခါမွာကိုယ်ေတာင်မွပဲအခုၿခိန်မွာတဈေယာက်တည်းအၿပိဳကြီးဖြဈနေသေးတာပဲ။စိတ်ကူးနဲ႔လက်ေတွ႔တဈထပ်တည်းကႀတဲ့အခါ….”လို႔ဆိုတဲ့ ‘ဆူဇီ’…
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေgfatt media9 vday
ပရိသတ်တွေကို ကြေညာစရာ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ G Fatt…
[Unicode] ပရိသတ်တွေကို ကြေညာစရာ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ G Fatt ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာလုပ်မလဲတော့…. #Media9 #Gfatt [Zawgyi] ပရိသတ်တွေကို ကြေညာစရာ အႏုပညာ လႈပ်ရွားမႈတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ G Fatt ချစ်သူျမားေန႔မွာ ဘာလုပ်မလဲေတာ့…. #Media9 #Gfatt
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေKMH kogyi media9 oasix pepsimusiclounge vday yzet
Valentine’s Day ကိုကျွန်တော်တို့ Junction Square က Pepsi Music Lounge မှာရှိပါမယ်..
[Unicode] “ကိုကြီးနဲ့ချစ်ရင်စိတ်ချမ်းသာရမယ်၊အလိုလိုက်ခံရမယ်၊အချော့ခံရမယ်။ညီမလေးကိုအသည်းကွဲအောင်မလုပ်တာကိုကြီးပဲ”လို့ဆိုတဲ့ Oasix, Y.zet, KMH [Zawgyi] “ကိုကြီးနဲ႔ချစ်ရင်စိတ်ချမ်းသာရမယ်၊အလိုလိုက်ခံရမယ်၊အေျခာ့ခံရမယ်။ညီမေလးကိုအသည်းကွဲေအာင်မလုပ်တာကိုကြီးပဲ”လို႔ဆိုတဲ့ Oasix, Y.zet, KMH
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေbillylaminaye fa media9 vday
FA ဆိုတာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ ဘီလီလမင်းအေး…
February 10, 2020 by media9
[Unicode] “ဖူးကိုယ်တိုင်ကလည်း FA ပဲ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကိုလွတ်လပ်ပြီးမှပျော်စရာကောင်းပါတယ်” ( ဘီလီလမင်းအေး ) #Media9 #bellilaminaye [Zawgyi] “ဖူးကိုယ်တိုင်ကလည်း FA ပဲ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကိုလွတ်လပ်ပြီးမွေျပာ်စရာေကာင်းပါတယ်” ( ဘီလီလမင်းေအး ) #Media9 #bellilaminaye
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေmedia9 thirisoe vday
February 6, 2020 by media9
[Unicode] “မှေးနေ့က ၂၂ ရကျနေ့၊Valentine’s Day က ၁၄ ရကျနေ့ဆိုတော့အမွဲတမျးလကျဆောငျပေါငျးပွီးတဈခုပဲရတယျ။စိတျမကောငျးဘူး”လို့ဆိုတဲ့ ‘သီရိစိုး’… [Zawgyi] “မွေးနေ့က ၂၂ ရက်နေ့၊Valentine’s Day က ၁၄ ရက်နေ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းလက်ဆောင်ပေါင်းပြီးတစ်ခုပဲရတယ်။စိတ်မကောင်းဘူး”လို့ဆိုတဲ့ ‘သီရိစိုး’…
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗြီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေmedia9 phyuphyukyawthein phyuphyukyawtheincobracollab vday
Valentine’s Day မှာကောျဘရာနဲ့စုံတှဲသီခငြျးနှဈပုဒျထှကျဖို့ရှိတယျဆိုတဲ့……’ဖွူဖွူကြောျသိနျး’…
[Unicode] “Valentine’s Day လကျဆောငျဘယျသူကစောစောစီးစီးပေးလညျးဆိုတဲ့အပေါျမှာမူတညျတာပေါ့။ဖူးစာဆိုတာဦးရာလူပဲ”လို့ဆိုတဲ့…’ဖွူဖွူကြောျသိနျး’ [Zawgyi] “Valentine’s Day လက်ဆောင်ဘယ်သူကစောစောစီးစီးပေးလည်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့။ဖူးစာဆိုတာဦးရာလူပဲ”လို့ဆိုတဲ့…’ဖြူဖြူကျော်သိန်း’